မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီအတွက်ကြိုးပမ်းနေသူအားလုံးကိုကျေးဇူတင်ကြောင်းအမေရိကန်ပြော – MC Tv Club
အမေရိကန်အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေး ဂျိုက်ဆူလီဗန်။ ။ “ကျွန်တော် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ အကြီးတန်းတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ ထိတွေ့ပြောဆိုခွင့်ရခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ ဒီမိုကရေစီ ပြန်လည်ဖော်ဆောင်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ သူတို့ရဲ့ ရဲစွမ်းသတ္တိနဲ့ ကတိကဝတ်အတွက် သူတို့ကို ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းလည်းပြောခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
“လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေအကြောင်းနဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေအကြောင်းတွေကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ ဒေသတွင်းအဓိကျပြီး စစ်အာဏာရှင်အပေါ် လွှမ်းမိုးမှုရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေနဲ့ ကျယ်ပြန့်တဲ့သံတမန်ရေးရာကိစ္စရပ်တွေ၊ အဲဒီနိုင်ငံတွေကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ခိုင်မာအားကောင်းတဲ့သတင်းစကားတွေ ဘယ်လိုပေးပို့နိုင်မလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေကိုပါ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
“နောက်ပြီး ဒီကနေ့မနက်ကပဲ သမ္မတကြီးဘိုင်ဒင်ဟာ အမေရိကန်-အာဆီယံ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာ ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ အာဆီယံကလည်း စစ်အာဏာရှင်ခေါင်းဆောင် – ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် – ကို ပါဝင်တက်ရောက်ခွင့်ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ သမ္မတကြီးဘိုင်ဒင်ကလည်း အာဆီယံအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ သဘောတူညီချက်ငါးရပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုရှေ့ဆက်လုပ်ကြမလဲဆိုတာကို အာဆီယံနဲ့ ဆွေးနွေးပြောဆိုညှိနှိုင်းခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
U.S. National Security Advisor Jake Sullivan: “I did have the opportunity to engage very senior officials in the NUG and had the opportunity to express to them our gratitude for their courage and commitment to seeking to restore the democratic path in Burma as well.
“And we discussed humanitarian aid and the difficult circumstances the Burmese people find themselves in. We discussed broader diplomacy with the key countries in the region and those with influence on the military junta, and how the United States could send strong messages to those countries as well.
“And, in fact, just this morning, President Biden has participated in the U.S.-ASEAN Summit, and ASEAN has taken the step of denyingaseat at that summit to the junta leader — the commander-in-chief. And President Biden had the opportunity to consult and coordinate with ASEAN in terms of how to move their Five-Point Consensus forward.
“So, we will continue to stay focused on our steadfast support for the people of Burma, forademocratic path in Burma, and for the protection of the safety, security, and human rights of the citizens of that country.”
Full press briefing: https://go.usa.gov/xexc4
Previous Article တော်လှန်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းနေတဲ့လူငယ်လေး မိဘတွေရဲ့ အမွေပြတ်စွန့်လွတ်ခြင်းခံရ
Next Article ချက်နိုင်ငံရှိ NUG ရုံးဖွင့်ပွဲ ချက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ညွှန်ကြားရေးမှူးတက်ရောက်